Toddobaadkan, waxaan la yeeshay sheeko la yaab leh saaxiibkay da 'yar oo ka shaqeeya warshadaha suuqgeynta. Qofku wuu jahwareersanaa. Waxay khabiir ku ahaayeen waxsoosaarka sanado badan oo natiijooyin aan caadi aheyn. Si kastaba ha noqotee, badiyaa waa la iska indhatiray markay tahay fursadaha hadalka, talo bixinta, ama fiirsashada madaxda. Markay ahayd 40 jir, awooddaydu waxay aad uga daahday qaar badan oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha la aqoonsan yahay ee ku dhex jira suuqgeynta. Sababta ayaa ah mid fudud - anigu waxaan ahaa
Joornaalka 'Search Engine Journal' wuxuu soo saaray nooc saddexaad oo sanadle ah oo ah infographic ku saabsan koritaanka sii socda ee warbaahinta bulshada, iyadoo laga helayo tirakoob dhammaan shabakad bulsheed illaa 2015. Waxay ku furmaysaa xigashadan ka timid Gary Vaynerchuk. Markaan maqlo dadku waxay ka doodayaan ROI ee baraha bulshada? Waxay iga dhigaysaa inaan xasuusto sababta ay ganacsiyo badani u fashilmaan. Ganacsiyada badankood ma ciyaarayaan maaratoonka. Waxay ciyaarayaan orodka. Kama walwalayaan qiimaha nolosha iyo sii haynta. Way ka walwalayaan
Dhowr sano ka hor, waan joojiyay raadinta taageerayaasha iyo kuwa raacsan. Uma jeedo taas in la yiraahdo ma aanan dooneynin inaan sii wado kasbashada dadka soo raaca, waxaan u jeedaa inaan joojiyay raadinta. Waxaan joojiyay inaan ku saxsanaado siyaasad ahaan khadka tooska ah. Waxaan joojiyay iska ilaalinta khilaafaadka. Waan joojiyay dib u celinta markii aan lahaa ra'yi adag. Waxaan bilaabay inaan run ka ahaado waxa aan aaminsanahay oo aan diirada saaro bixinta qiimaha shabakadeyda. Tani kuma dhicin uun bulshadayda
Saturday, April 27, 2013 Axad, Abriil 28, 2013 Douglas Karr
Kaliya madaxyada 'in fiidiyowgaan uu leeyahay luuqad midab leh. Haddii aad shaqada ku jirto, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad gashato dhagaha. Tani waa fariin toos ah oo toos ah oo toos ah oo ka socota Gary Vaynerchuk. Waxaan jeclahay fariinta ah in baraha bulshada ay tahay istiraatiijiyad waqti dheer waana mida shirkadaha badankood ay fahmi waayaan. Waxaan marwalba u sheegaa dadka waawayn inay u egtahay akoon hawlgab. Kama fileysid inaad lacag bixinayso bil kadib,